I-Wholesale Ethengisa Izingubo Ezinde Eziyimpahla Yezilwane Ezisebenza Ngayo Esebenza Kahle Kakhulu Nomkhiqizi Nomhlinzeki |I-Skylark
Ucingo: +86 18908183680
I-Professional High-Efficiency High-Chlorine Bleaching Powder Wi...
Izingubo Ezisebenza Kakhulu Ezisebenza Kakhulu Ukuwohlozwa NgePeni Enhle Kakhulu...
I-Kitchen Degreaser Esebenza Kahle Kahle Kakhulu
I-Professional Bio-enzyme Deodorizer Spray For Pet Living E...
I-Professional Pet De-Greaser Esebenza Kahle Kakhulu
I-Professional Long Coat Pet Conditioner Esebenza Kahle Kakhulu
Umkhiqizo ungahlanza kahle izinsalela futhi ungene ku-epidermis, uthuthukise ukuhlangana okubushelelezi nokomile, futhi uthuthukise umphumela wokuthambisa wezinwele.
Umhlaba jikeleleumthengisi, umthengisifuthiumkhiqiziyekhwalithi ephezulu yokuhlanza izilwane ezifuywayo kanye nemikhiqizo yokunakekelwa.Singakhiqiza imikhiqizo ye-Logo yakho ngokwezidingo zakho.Sigxile ekuhlinzekeni ngemikhiqizo esebenza kahle, ehambisana nemvelo, esezingeni eliphezulu, egxilile.
Noma yimiphi imibuzo siyajabula ukuyiphendula, pls thumela imibuzo yakho nama-oda.
Isampula Lesitoko Simahhala Futhi Siyatholakala
Ijazi elideI-Pet Conditioner
Noma yiziphi izinhlobo zamakati nezinja ezinejazi elide
Okokugeza amakati anejazi elide nezinja zanoma yiluphi uhlobo.
I-OEM/ODM, I-Wholesale, Ukudayisa
Iphunga, Ukucaciswa, Umbala, Isitsha, Ukupakisha
I-MOQ yokwenza ngendlela oyifisayo
NJENGOBA IZIDINGO ZAKHO
NJENGOBA KUnconywe UPRO
I-BOURENA Long Coat Pet Conditioner iwumkhiqizo omuhle kakhulu “ophakathi kwezilwane ezifuywayo” owanelisa izindinganiso ze-EU ngaphandle kwama-colorants, uwoyela we-silicon.Umkhiqizo ungahlanza kahle izinsalela futhi ungene ku-epidermis, uthuthukise ukuhlangana okubushelelezi nokomile ngaphandle kokuthambisa izinwele zezilwane ezifuywayo., Okwandisa ikhwalithi yezinwele ezifuywayo.Ngesikhathi esifanayo, ingena ku-stratum corneum ukulungisa imifantu yangaphakathi futhi ithuthukise umphumela womswakama wezinwele.
1. I-BOURENA pet conditioner kufanele isetshenziswe ngemva kokusebenzisa i-BOURENA shampoo yesilwane noma amanye ama-shampoos ezilwane ezifuywayo.
2. Hlanganisa i-conditioner namanzi ngesilinganiso se-1: 8 ku-milkshake, uthele entendeni yesandla sakho.
3. Faka i-diluent ngqo ezinweleni futhi uyisebenzise ezinweleni ngeminwe yakho imizuzu engu-3.
4. Hlanza ngamanzi afudumele ukuze ususe izinsalela ze-shampoo.
5. Yomisa izinwele zakho nesitayela ngendlela evamile.
Lo mkhiqizo unconywa ukuthi usetshenziswe ne-BOURENA pet shampoo ehambisana nobude bezinwele nombala wayo wezinwele ukuze uthole umphumela ongcono.
● Sicela uhlanze ngokuphelele izinwele zesilwane esifuywayo lapho ugeza ukuze uvikele isilwane esifuywayo ukuthi sikhothe insalela noma ukuthintana namehlo.Ukukhothwa kwensalela ngokweqile kungase kubangele ukucasuka komgudu wokugaya ukudla futhi kubangele ukuhushulwa komile kwesilwane esifuywayo.
● Okokusetshenziswa kwangaphandle kuphela.
Q: Ngingaba nomklamo wami owenziwe ngezifiso womkhiqizo nokupakishwa?
A: Yebo, kungaba OEM njengezidingo zakho.Vele usinikeze umsebenzi wakho wobuciko oklanyelwe thina.
Q:Ngingawathola kanjani amasampuli?
IMP: Ingahlinzeka ngamasampula wamahhala wokuhlolwa ngaphambi koku-oda, vele ukhokhele izindleko ze-courier.
Q:Ithini imigomo yokukhokha?
A: 30% idiphozi ye-T/T, 70% ibhalansi ye-T/T yokukhokha ngaphambi kokuthunyelwa.
Q:Isebenza kanjani imboni yakho mayelana nokulawulwa kwekhwalithi?
A: Sinesimiso esiqinileikhwalithi yokulawulauhlelo, futhi ochwepheshe bethu bazohlola ukubukeka nemisebenzi yokuhlola yazo zonke izinto zethu ngaphambi kokuthunyelwa.
Okwedlule: I-Professional Short Coat Pet Conditioner Esebenza Kahle Kakhulu
Olandelayo: I-ejenti yamapayipi esebenza kahle kakhulu Esebenza Kahle Kakhulu
Njengamanje, inkampani ikhulisa ngamandla izimakethe zaphesheya kanye nokwakheka komhlaba wonke.Eminyakeni emithathu ezayo, sizibophezele ekubeni ngelinye lamabhizinisi ayishumi ahamba phambili embonini yamakhemikhali yansuku zonke yaseShayina, esebenzela umhlaba ngemikhiqizo yeqophelo eliphezulu kanye nokuzuza isimo sokuwina namakhasimende amaningi.
Umkhiqizo Wezilwane Ezifuywayo
Ukugeza izilwane ezifuywayo
I-Professional Pet Coat Smooth Liquid With Excell...
Ijazi Elifushane Elifushane Le-Pet Shampoo Ene-Excel...
I-Shampoo Yombala Wokunakekela Ijazi Lezilwane Ezifuywayo Esebenza Nge-E...
I-professional Long Coat Pet Shampoo Enhle Kakhulu...
I-Professional Short Coat Pet Conditioner With Ex...
Igwebu Lokuhlanza Izinyawo Zezilwane Ezifuywayo Nge-Excel...